Duqeemo Xalay kadhacay duleedka magaalada kismaayo ayaa lagu sheegay in lagu dilay maxamed Dulyaden – STAR FM SOMALIA
Duqeemo Xalay kadhacay duleedka magaalada kismaayo ayaa lagu sheegay in lagu dilay maxamed Dulyaden
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in la soo bandhigay meydadka afar ka mid ah Al-Shabaab, kuwaasoo lagu dilay howl gal ka dhacay deegaanka Buulo Gaduud oo qiyaastii 30KM u jirta Kismaayo.
Mas’uuliyiinta Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in howl gal ka dhacay deegaanka Buulo Gaduud ay ku dileen afar nin oo mid ka mid ah uu ahaa Sheekh Maxamed Dulyadeyn oo ka tirsanaa saraakiisha sar sare ee Al-Shabaab.
Wasiirka Amniga Jubbaland C/rashiid Xasan Cabdi Nuur oo Wariyeyaasha kula hadlayay goob lagu soo bandhigayay meydadkan ayaa sheegay in Dulyadeyn iyo labo xubnood oo kale Al-Shabaab u qaabilsanaa Qaraxyada la dilay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Dulyadeyn lagu dilay howl gal gaar ah oo ay si wada jir ah u fuliyeen Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ah, kuwaasoo watay diyaarado helicoptero ah.
Maxamed Dulyadeyn oo lagu naaneyso Kuno ayaa horay loogu eedeeyay inuu soo abaabulay weerarkii Gaarisa, waxaana dowladda kenya ay madaxiis dul dhigtay lacago fara badan.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada Maamulka Jubbaland ee ah inay dileen maxamed Dulyaden.
Wasiir Cabdisalaam Hadliye oo Beeniyey inuu Heshiis la Galay Norway
Magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu soo bandhigay meedad la sheegay in ay katirsanaayeen al-shabaab(Daawo Sawirada)